आजकल क्यान्सरको रोगि किन यति धेरै बढ्दै छन् त?
नयाँ र उपलब्धिले भरिएको यस युगमा स्वास्थ क्षेत्रमा हामीले ठुलो फड्को मार्दै आएका छौं। यी नवीनतम आविस्कारहरुले हाम्रो जीवनस्तर राम्रो भएको छ र आयु पनि बढेको छ। तर अझ पनि डरलाग्दो केहि रोगहरुको उपचार अथवा सम्पूर्ण विवरण सम्म पाउन पनि गार्हो हुन्छ। क्यान्सर सबैभन्दा धेरै सुनिएको तर धेरै जानकारी नभएको रोग हो।
क्यान्सरको थुप्रै रुप र किसिम हुन्छन्, र कुनै क्यान्सरको उपचार गर्न मिल्छ, कुनैको मिल्दैन। पहिलेभन्दा अहिले क्यान्सर धेरै जनमानिसमा देखा पर्छ। क्यान्सर लागेको बिरामीको संख्या हरेक बर्ष बढ्दै गएको पाइन्छ। धेरै किसिमको क्यान्सरको उपचार वा पत्ता लगाउने बिधि नभएको कारण यसबाट मृत्यु हुने बिरामीको संख्या धेरै छ। हरेक क्यान्सर अर्को प्रकारबाट भिन्न हुन्छ किनभने मानिसको genetic मेरुदण्डले क्यान्सरको रहस्य राखेको हुन्छ। विभिन्न अनुशन्धानहरुबाट पत्ता लागेको कुरा हो कि मानिसको genetic mutation ले क्यान्सर लाग्छ, तर किन र कसरि भन्ने कुरा अझ पनि रहस्यमा नै डुबेको छ। त्यसैले पनि क्यान्सरको उपचार अप्ठ्यारो छ। केहि बर्ष अगाडी नाम पनि नसुनिएको क्यान्सर अहिले धेरै ज्यान जोखिममा पर्ने बनिसकेको हुनसक्छ। यस्तो किन हुन्छ त? पूर्णतया प्रमाणित नभए पनि धेरैले मानेको हुनाले तल लेखिएका केहि कारणले क्यान्सर लाग्न सक्छ।
बढ्दो आयु: हामी जति बुढो हुँदै जान्छौं, हाम्रो शरीरको रोगसंग लड्ने शक्ति त्यति कम हुँदै जान्छ। हाम्रो आयु संगै क्यान्सरसंग लड्ने शक्ति कम हुँदै जान्छ र धेरै mutationsहरु देखा पर्छ। यसले रोगहरु संग लड्ने क्षमता कम हुन्छ। हामी बढ्दो आयु ता रोक्न सक्दैनौं, तर आयुको असरलाई रोक्न सक्छौं। स्वस्थ खाने बानि र जीवनस्तर राम्रो बनाएर हामी क्यान्सरको जोखिम कम गर्न सक्छौं।
जीवनस्तर: चुरोट, सुर्ती, मादकपदार्थ, धेरै प्रशोधित खाना, कृतिम मलको अधिक प्रयोग आदि क्यान्सरको प्रमुख कारक हुन्। अस्वस्थ जीवनशैली, मोटोपना, व्यायाम नगर्नु, आदिले हाम्रो शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीमा असर पारेर क्यान्सर निम्त्याउँछ।
बढ्दो प्रदूषण: प्रदूषण मानवताको ठुलो समस्या बनेको छ। बढ्दो जमिन प्रदूषण, जलवायु प्रदूषण, आदिले हामीसंग सम्पर्कमा आउने क्यान्सर लगाउने तत्वहरु बढाउन सहयोग गर्छन्। Formaldehyde, Acetaldehyde(मादकपदार्थमा हुने), Acheson प्रक्रिया, arsenic, आदिले छालाको क्यान्सर हुन्छ।
विकिरण: घाममा धेरै समय बस्दा घामको विकिरणहरुले छालाको क्यान्सर हुन्छ। पतालिँदो ओजोन(ozone) ले UV-Rays हरु धेरै मात्रामा पृथ्वीको सतह सम्म पुग्ने भएको छन्। घाममा धेरै बेर बस्ने बेला होसियारी अपनाउन जरुरि छ।
भाइरस संक्रमण: केहि वाइरस, ब्याक्टेरिया, आदिहरुले मानिसमा क्यान्सरको कारक हुन सक्छन्। HIV संक्रमण, AIDS, Human Papilloma Virus (HPV) आदिहरु क्यान्सरसंग सम्बद्ध भएको पाइन्छ।
तर हामीले केहि गर्नै सक्दैनौं भन्ने होइन। अहिले क्यान्सर पक्का गर्न र रोकथाम गर्ने धेरै परिक्षणहरु गर्न सकिन्छ। पहिलाको चरणहरुमा क्यान्सर पत्ता लाग्यो भने मानिसको निको भएर बाँच्ने सम्भावना बढ्छ। CT Scans, MRI, X-ray, अल्ट्रासाउण्ड र Mammograms, आदिजस्ता परिक्षणहरु अहिले गर्न पाइन्छ। Endoscopy, colonoscopy, and biopsy गरेर अझ निको हुने सम्भावना बढ्छ। क्यान्सर निको पार्न गार्हो हुन्छ, त्यसैले होसियारी राख्नु नै सबैभन्दा राम्रो हुन्छ।